Hoggaamiyaha waxa la ga rabaa in uu danta dalkiisa iyo dadkiisa ku tuntuunsado oo uu tiisa ka soo dhalaalo..W/Q Maxamed Hagi – somalilandtoday.com
Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;”> Hadda sidaa waxa ka dhigan Farmaajoha Xamar! Bal u fiirso sida uu shanshada dheriga aannu lahayn ugu ritay. Maxaa Soomaaliya ugu jira heshiiska Itoobiya iyo Eritrea ee aan ahayn luggooyo faduuli waddo? Maxaa Soomaaliya ugu jira heshiisiiinta Jabuuti iyo Eritrea ee aan masaalax baydhsan oo Soomaali ka dhan ah ahayn?